Ibhizinisi ngumsebenzi wezamabhizinisi. Iholwa yizihloko zomnotho wemakethe, imizimba yombuso ngosizo lwezimali ezibolekwe ngaphansi komthwalo wabo siqu noma izindlela zabo. Inhloso eyinhloko yemisebenzi engenhla ukukwenza inzuzo yokuthuthukiswa kwamabhizinisi abo.
Ibhizinisi elikhulu namuhla liyisisekelo sezomnotho. Amafemu amakhulu ngokudlulela kwemithombo yawo ancike ezimweni zemakethe ngezinga elincane. Ngamanye amazwi, ibhizinisi elikhulu linomthombo wemithombo, elingasetshenziswa uma kunezimiso ezimakethe ezingalungile. Ngaphezu kwalokho, amafemu amaningi amakhulu, ngenxa yesabelo sabo esiphezulu, atholakale emakethe (isibonelo, izinguquko zamanani). Lokhu, kuholela emizamweni yokwenza imali, njengoba ithokoza ukuncintisana. Kulokhu, inqubomgomo ye-antimonopoly yenziwa ngokuphathelene nezinkampani ezinkulu kakhulu.
Ibhizinisi elikhulu - incazelo inkulu kakhulu. Lo mqondo ubonakala ngokuhlangana kwamabhizinisi amaningana azungeze uchungechunge oluthile lwezobuchwepheshe, iqembu lezimpahla noma iqembu elivamile labaphathi nabaphathi abaphezulu. Isibonakaliso esikhulu sokulinganisa kwenhlangano enkulu yikhiqiza yokuthengiswa kwezinsizakalo kanye nezimpahla (inzuzo), njengoba ubukhulu bemali emakethe kanye nenzuzo ngokuyinhloko kuxhomeke ekuziphatheni okwamukelekile kwabadlali emakethe yamasheya noma ohlelweni lokubalwa kwemali.
Kumele kuqashelwe ukuthi amafemu amakhulu enza igalelo elikhulu ekuthuthukiseni izimboni eziningi, ikakhulukazi, ulwazi olujulile (oluyinkimbinkimbi) kanye nezimali ezinkulu (imali enkulu). Ngokuvamile, ukuhlola ukukhiqizwa kwemikhiqizo ethile, kungabonakala ukuthi inqubekela phambili enkulu kakhulu yenziwa ibhizinisi elikhulu. Ukukhathazeka okukhulu kuyakwazi ukuthuthukisa ukuthuthukiswa nokukhiqizwa okukhulu kwemikhumbi, izimoto, imishini yamandla, imishini yezolimo, imikhiqizo esiphelile kanye nezinto (amaplastiki, aluminium, steel). Ngaphezu kwalokho, amabhizinisi amakhulu angakwazi ukuhlela ukukhishwa kwe-ore, amafutha, igesi nezinye izinto zokusetshenziswa. Konke lokhu kubangela isimo sengqondo esithile sokuthi isimo sibhekene namabhizinisi amakhulu. Ngakolunye uhlangothi, bazama ukunciphisa umgomo we-antimonopoly. Ngakolunye uhlangothi, ibhizinisi elikhulu lixhaswa njengesizathu sezinhlelo ezinkulu ezinkulu nolwazi olunzulu.
Emazweni amaningi athuthukile, amabhizinisi amakhulu ahlala endaweni ehamba phambili emnothweni. Ngokujwayelekile, ama-akhawunti amakhulu ebhizinisi angaba phakathi kwe-50 no-60% we-GDP (umkhiqizo omkhulu wekhaya). Ngokungangabazeki, amabhizinisi amakhulu alawula ezimbonini eziningi zobunjiniyela (ukukhiqiza izinsimbi, imboni ye-electrotechnical, ubunjiniyela bokuthutha), imboni yamakhemikhali, i-fuel and energy complex, izimboni ezingezona ezensimbi nezensimbi, izimboni zokuqothula.
Ibhizinisi elikhulu linomthelela ekwandeni kokukhiqizwa kokukhiqiza ezimbalwa zezimboni zesevisi. Ngokuyinhloko, lokhu kuhilela imfundo ephakeme, ukukhiqizwa kwesofthiwe, ezezimali, ezempilo, ezokuhweba nezinye izindawo. Isibonelo, eMelika, amabhizinisi amakhulu athola cishe ama-47% wabasebenzi kanye no-60% we-GDP.
E-Russia, izinhlobo ezinkulu zibhekwa njengeziphumelela kakhulu kunezinkampani ezincane nezindawo eziphakathi, nangokwezinga lokukhula, ukukhiqiza, nokuzuza. Isikhundla esikhethekile sebhizinisi elikhulu laseRussia lavunyelwa isikhathi sezinguquko ukugxila ekuhambeni okukhulu kwezimali. Ngenxa yalokho, amafemu amakhulu akwazi ukuhlela amaqembu akwanele anamandla abaphathi abaqeqeshiwe nabahlomile kakhulu. Ngokuhambisana nalokhu, ubukhulu bamabhizinisi amakhulu eRussia bubonakala buncane kunamanye amazwe athuthukile.
Ukukhiqiza ngokocansi phakathi kwabameleli abaphezulu nabaphansi bezitshalo
Abacwaningi "bafundise" ukuhlakanipha okufakelwa ukudala imibala emisha
Uyini ukulandelana izizukulwane?
Medicine "Prostamol Uno". Yokusetshenziswa
Inkampani Investment "Qala-Invest": libuyekeza emabhange
Salad obomvu iklabishi etafuleni lakho
Ukucaca rose kuKhesari: incazelo grade nokunakekela ethile
Biography Lolita - owesifazane eqinile nomlingisikazi abanamakhono
Wokwelapha isifo somdlavuza webele
Umsebenzi wokusabalalisa wezezimali. Amaphuzu avelele